Doorashadda Cabdikadir Xasan (AK) oo taariikh dhaxal gal ah reebtay -
Maalintii talaadada ee taariikhda bisha November ahayd 11/07/2017 ayaa waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu qabtay doorasho lagu dooranayey maamulka iyo gudiga gudoonka waaxyaha kala duwan ee ay magaaladu ka kooban tahay.
Musharixiin Soomaali ah oo ay tiradoodu gaareyso 8 qof ayaa iyagu kuraas u tartamayey gobolka Minnesota. Saddex qof oo ah musharixiinta Soomaaliyeed ee tartamaysay ayaa iyagu ku guulaystay xilkii ay u ordayeen ee kala dhacayey magaalooyinka Hopkins iyo Minneapolis.
Musharraxa Cabdikadir Xasan (AK) ayaa kamid ah dadka la doortay maalintii talaadada ayaa isagu reebay taariikh dhaxal gal ah. AK Xasan ayaa isagu ka guuleystay Cabdi Gurhan Mohamed iyo Charles Exner oo kula tartamayey Guddiga gudoonka goobaha carwooyinka magaalada Minneapolis ayaa noqday qofka ugu da’da yar, qofkii ugu horeeyay ee Muslim ah iyo waliba Soomaaligii ugu horeeyay ee loo doorto kursi noocan oo kale ah dhamaan dalka Mareykanka.
Tartanka loogu jiray kursiga Guddiga gudoonka goobaha carwooyinka magaalada Minneapolis ee degmadda 3-aad ayaa ahaa mid aad loo hadal hayey, olole aad u weyna ay galeen dhinacyadii iyagu u tartamayey in ay hantaan xilka kursigan.
Adam Ugaas oo isagu kamid ah dadkii hogaaminayey ololaha doorasho ee musharrax AK Xasan ayaa isagu la yimid nidaam cusub oo ka duwan qaabka ay inta badan musharixiinta Soomaaliyeed tartanka siyaasadeed u galaan. Adam Ugaas ayaa ku guuleystay in uu hanto coddad kala duwan, isla markaasna codbixin iyo taageero buuxda ka helay dadweynaha deggan degmadda 3-aad oo ay musharixiin kale loolan ugu jireen.
Dadweyana degan degmadda 3-aad ayaa iyagu kalsoonidooda siiyey, doortayna musharrax Cabdikadir Xasan (AK) oo isagu noqonaya qofkii u horeeyay ee dhallinyaro ah ee qabta ama loo doortay xilka Guddiga gudoonka goobaha carwooyinka magaalada Minneapolis.
Cabdikadir Xasan (AK) oo ah wiil dhallinyaro ah oo aad u da’yar ayaa haddaba waxa isaga iyo shaqaalihii u ololaleenayey doorashadiisa ay soo bandhigeen dadaal, firfircooni iyo nidaam natiijo dhaliyey oo sababay in dadka doortay ama taageeray AK Xasan ay noqdaan dadweyne ka matalaya dhamaan jaaliyaddaha kala duwan ee iyagu ku dhaqan degmadda 3-aad ee ay doorashadu ka dhacaysay.
Related Items:Featured, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis, U.S Election
Dadweyanaha Degmadda Lixaad oo Cabdi Warsame Dib u Doortay